Dowladda Soomaaliya oo kuwait ku amaantay doorkii dhex dhexaadinta Sacuudiga iyo Qadar. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Dowladda Soomaaliya oo kuwait ku amaantay doorkii dhex dhexaadinta Sacuudiga iyo Qadar.
Dowladda Soomaaliya oo kuwait ku amaantay doorkii dhex dhexaadinta Sacuudiga iyo Qadar.
Kuwait ayaa sheegtay in Sacuudiga uu xudduudihiisa dhulka iyo badda u furayo Qadar, taas oo soo afjareysa xiisaddii muddada dheer ka dhex aloosneyd Qadar iyo dalalka Khaliijka ee deriska la ah.
Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo maanta dalka Sacuudiga uu ka dhacayo shirka Iskaashiga Golaha Khaliijka.
Sarkaal sare oo Mareykanka ka socda ayaa sheegay in la kala saxiixan doono heshiis lagu soo afjarayo xiisadda.
Dalalka deriska la ah Qadar ayaa ku soo rogay xayiraad saddex sano iyo bar kahor, iyagoo ku eedeeyay inay taageerto argagixisada.
Dalalka Imaaraatka Carabta, Baxreyn iyo Masar ayaa la saftay Sacuudiga, iyagoo xayiraad diblomaasiyeed, mid ganacsi iyo mid safarba ku soo rogay Qadar.
Qadar, oo ah dal yar balse aad qani u ah kuna yaalla Gacanka Khaliijka, ayaa beeniyay inuu taageero kooxaha jihaad doonka ah.
Soomaaliya oo soo dhoweysay
Dhanka kale, dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay shirka Sacuudiga ka dhacaya ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso bayaanka Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Kuwait.
Waxaa bayaanka lagu sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay bogaadineyso dadaalka Kuwait ee uu soo bilaabay amiirkii dalkaas ee geeriyooday, Sheekh Sabaax Axmed Aljaabir.
Markii uu soo ifbaxay khilaafkii khaliijka waxa markiiba uu saamayn ku yeeshay dalalka Muslimiinta iyo kuwa Carabta.
Waxaa bilaabmay in Qadar iyo dalalka kale ee go’doomiyay ay taageero raadsadaan.
Go’aanka waxaa dhexdhexaadka ka noqotay dowladda Kuwait oo labada dhinac u kala dabqaadaysay, balse waxaa jiray dowlado badan oo Islaam iyo Carab isugu jira oo la saftay Sucuudiga, xiriirkana u jaray ama hoos u dhigay Qadar.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilligaasi la filayay in dhinac uun ay raaci doonto.
Balse taasi ma dhicin, golaha wasiirrada oo shir yeeshay 6-dii June, 2017-kii, ayaa go’aan ku gaaray in muranka Khaliijka ay dhexdhexaad ka yihiin, waxayna ku baaqeen in dalalka muransan la dhexdhexaadiyo, inkastoo aysan arrintaas ku waafaqin qaar ka mid ah maamul-goboleedyada.
Previous articleDowlada Itoobiya oo balan qaaday in ay dib u dhiseyso Masjid ay horay u dhiseen Saaxabadii Nabaiga SCW.
Next articleSomali Police Nabbed Al-Shabaab Suspects In Jowhar Sweep